Banyere Anyị - Shijiazhuang Pengtong IMP & exp Co., Ltd.
Cotton & spandex ákwà
Home akwa ákwà
Pocketing & lining ákwà
Polyester naịlọn ákwà
Tr uwe ákwà
Yarn e sijiri ákwà
Shijiazhuang PengTong IMP. & Exp. Co., Ltd. ---- bụ a sara mbara ala ọzọ na-amị & trading enterprise. The ụlọ ọrụ ụgha na Shijiazhuang nke Hebei nke mba akwa isi, nke bụ otu n'ime ndị kasị ibu akwa bases na China. E nwere 400 ịkpa ákwà igwe na-aga n'ihu dyeing & biri ebi igwe na ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike ikpa ihe karịrị 100 nde mita ingrey ngwongwo na dyeing karịrị 200 nde akwa kwa afọ.
Anyị na-enye dị iche iche nke ákwà mmepụta igbo mkpa nke anyị ahịa n'oge ahụ. Anyị isi mmepụta a na pocketing ----- owu, T / C, T / R, e nwere larịị, twill, herringbone. Ha na-ere anụ ụlọ ahịa na exported na ihe karịrị iri abụọ mba na ebe dị ka US, Hongkong, Southeast Asia, Middle East na Europe.
Anyị niile na-esi echiche ọhụrụ isi na ezi mma na nwere ihe magburu onwe aha si ahịa.
Anyị ga mgbe niile ịnọgide na iwu nke "Best Quality, asọpụrụ Ebe E Si Nweta, Ezi Service na obi Cooperation" na-enye mbụ na klas ọrụ n'ihi na niile ahịa. Ka ọ dịgodị, anyị ga-anọgide na-sikwuo anyị amaka na anụ ụlọ na mba ahịa na ndabere nke mma ngwaahịa àgwà na ọrụ.
PengTong na-atụ anya na-emepe emepe ọnụ na ị na-eme n'ọdịnihu.
Anyị eguzobewo a zuru okè management usoro na mmepụta eruba, na-emepe emepe ngalaba, nnyemaaka ngalaba, QC ngalaba, Finance ngalaba.
anyị niile ahịa: H & M ọdịiche ZARA ELAND Livaị isi ụlọ Tommy
Ụlọ ọrụ na ahia mwekota
Anyị nwere onwe anyị factory, otú anyị nwere ike belata-akwụ ụgwọ na-alaghachi na uru azụ ahịa, ma ugbu a, anyị nwere ike inye ọkachamara ọrụ.
Ọ bụrụ na e nwere ọ bụla mma nsogbu mgbe saleing, anyị ga-eme ndokwa pụrụ iche onye enyemaka ngwe nsogbu ozugbo o kwere omume
ike arụpụtaghị nchedo
Anyị nwere nile di iche iche nke mgbagharị looms 400 tent, nwere ike Nlụpụta 14 nde mita nke ákwà kwa afọ
Site ụlọ ọrụ nke Tianjin n'ọdụ ụgbọ mmiri na Qingdao n'ọdụ ụgbọ mmiri, anyị nwere ike inye ọrụ nke "The kasị nnyefe oge, oge mbụ nnyefe".
Tinye: RM # 1201, Ximeiwuzhou Plaza, Huaian East Road, Yuhua District, Shijiazhuang, Hebei, China
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Apụta Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile
100 Cotton Yarn Dyed Chambray Fabric, Tc Yarn e sijiri Fabric, Yarn Dyed Check Fabrics, Yarn Dyed Brushed Fabric, 100 Cotton Yarn Dyed Woven Fabric, Tc 65/35 32*32 106*58 Plain Fabric,